Chitoro | neVisa + Shanda + CV Services yeVatengi
Nyika dzakanakisa Kuparadza Kwezviitiko Zvekufamba
Chitoro - Dubai City Kambani
Chengetedza neVisa + Shanda + CV yeAxpats. Ndokumbira kuti usarudze kwaunoda kuenda! Zvatiri kuita zviuru zvevatorwa zvinowanzotaura, kubva India naizvozvowo Pakisitani uye Saudi Arabia. Isu tiri ikozvino kupa zvinoshamisa sevhisi kwavari. Saka, ndapota tarisa pane izvo Dubai City Company inogona kukuitira iwe. Se expat, iwe uchafanirwa kuve neruzivo rwakadzama kuti uwane basa. Nekudaro, Dubai City Kambani inopa nhungamiro dze expats. Pazasi yedu Visa pamwe chete nebasa uye zvechokwadi neinishuwarenzi yebasa.
Isu tine tariro yekuti muchasarudza nyika yenyu yakanaka. Pane yedu runyorwa, iwe uchave uine yepamusoro-yakatemerwa nzvimbo yekugara uye kushanda sevatorwa. Saka, semuenzaniso, iwe unogona kutamira kuJoridhani pamwe neSaudi Arabia, United States of America uye United Kingdom.
Mashandisiro atinoita Chitoro chedu?
Iwe unofanirwa kufunga nezve yako nyika yakakwana yekugara mairi. Ipapo iwe unofanirwa kusarudza Visa yako uye unogona kutenga masevhisi kubva kuchikwata chedu. Zvino pane yakanaka chikamu, timu yedu ichengete yako kutama maitiro. Saka, iwe unofanirwa kusarudza uye kutenga vhiza kubva kukambani yedu. Ipapo Dubai City Company timu revanyanzvi vanoita zvimwe zvese zvinodiwa kuti akubatsire iwe kuva expat muUnited Arab Emirates.
Visa kuMiddle East
Visa kuMiddle East nekambani yeguta reDubai. Saka kazhinji kutaura iwe unogona kuva nesarudzo yekukokwa kune imwe yeakanakisa uye nyika dzakawanda dzakakurumbira muMiddle East. Kambani yedu iri kubatsira vashandi vekunze kuti vawane basa kuKuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirate Rebhanoni uye kunyange Palestine. Saka kazhinji kutaura kana iwe uri kutarisa kuti uwane vhiza kune imwe yenzvimbo dzinozivikanwa uye imwe yenzvimbo dzakanakisa dzebasa uye ibva nemhuri yako uye neyako yekufungidzira. Iwe waizove nesarudzo iyoyo neDubai yekubata mukana webasa.
Shanda kuMiddle East! Tama nhasi!
Nekudaro, kana iwe uri mushandi wekunze uye uri kutsvaga kubata mukana webasa wakanaka mu Middle East. Kambani yeguta reDubai iri kubatsira vanhu vanobva Pakistan Pakistan Saudi Arabia. Uyezve, Dubai uye kunyange nyika dzekunze dzakadai seKuwait neRebhanoni. Isu tiri kubatsira vanhu vese pamwechete kuti vatore uye vabate maneja ekutarisira mabasa akajairwa mabasa uye bhuruu-collar mabasa. Saka isu tiri pano kuti tikubatsire zvakanyanya sezvatinogona kuti uve mushandi webasa anobudirira nekukupa iwe mikana yeVisa munyika yako yakasarudzwa. Iwe waizove nesarudzo yekusarudza kubva kune nyika dzine huwandu hwepamusoro dziri kubhadhara expats.
Isu tine tariro yekukuona muDubai kana Abu Dhabi. Uye ino ndiyo nyika yedu huru kwatingakuisa iwe uye tokupa Visa.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kungova kuraira Visa. Wobva wawedzera vhiza yako kungoro. Wobva waita muripo. Uye bhururuka uende kunzvimbo yako yakasarudzwa. Ndiwo ese anova anotsvaga basa Akabudirira.
Chero chipi zvacho Chimwe chaungada (97)
Dubai Zvigaro (76)
Kutsvaga Jobho (1)
muslim zvipfeko (158)
Kufamba Bhegi Kwezvikwereti uye Sutu (264)
Visa kuMiddle East (15)
hembe dzebasa (38)